Muusa biixi oo xalay isla Habeenimadii booqdsay Daad ay dad ku geeriyoodeen oo ku soo rogmaday Koofurt bari Hargaysa – Daily Som
Muusa biixi oo xalay isla Habeenimadii booqdsay Daad ay dad ku geeriyoodeen oo ku soo rogmaday Koofurt bari Hargaysa
By Staff on May 1, 2018 No Comment
Wararka ka imaanaya Magaalada Hargaysa ee Xarunta Maamulka Somaliland ayaa sheegaya in halkaas ay daad ku soo rogmaday Koofur Bari magaalada hargaysa ayaa waxaa ku geeriyooday Wiil yar oo afartan habeen jira iyo gabar ay walaalo ahaayeen oo iyane jirtay labo sano, waxaana aakhirkii la soo badbaadiyay Hooyada dhashay Caruurta oo miir beeshay.
sidoo kale warar aan si rasmi ah loo ogayn ayaa sheegaya in ay hooyada dhashay Caruunta ay ku geeriyootay Isbitaalka.
Daadka ku soo rogmaday Xaafada Qudhac-dheer ee Koonfurta-bari ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kale iyada oo ay Booliska Somaliland soo badbaadiyeen dad fara badan oo ay daadaku saameeyeen.
Taliyaha Ciidamada Baliiska Somaliland Somaliland Gen. Cabdullaahi Fadal Iimaan oo ka mid ahaa saraakiisha iyo askartra ugurmatay dadka ayaa sheegay in la soo badbaadiyay hooyada dhashay caruurrta, haddana lagu dabiibayo Isbitaalada Hargaysa.
Madaxwaynaha Somaliland ayaa ka mid ahaa dadka gaaray Goobta ay mashaqada ka dhacday waxa uuna sheegay in aad kaga xun thahay isla markaana uu utacsiyayno aabaha qoyska ay mashaqadu qabsatay waxa uuna ubalan qaaday in xukuumadu ay garab istaagi doonto.
Muusa biixi oo xalay isla Habeenimadii booqdsay Daad ay dad ku geeriyoodeen oo ku soo rogmaday Koofurt bari Hargaysa added by Staff on May 1, 2018